Dowlada Soomaaliya oo si ay dhaqaale uga hesho Maraykanka u kireysatay shirkada Park Strategies – Hornafrik Media Network
Dowlada federalka Soomaaliya ayaa bilowday qorshe ay ku dooneyso in uu u soo dabco Madaxweynaha Maraykanka Trump, iyadoo u maraysa shirkad ka dhisan dalka Maraykanka oo uu Madax ka yahay Mudane hore uga tirsanaa Congress-ka Maraykanka.
Alfonse Marcello D’Amato oo siddeetan jir ah ayaa shirkadan madax u ah, waxaana la sheegay in dowlada Soomaaliya ay kula heshiisay lacag gaareysa 120,000 oo dollar.
Heshiiskaan ayaa waxaa sidoo kale Dowlada Federalka Soomaaliya ay qorsheysay inay madaxa Shirkadda Park Strategies, Alfonse Marcello D’Amato siiso 36,000 oo Dollar. Waxaana ka mamnuucan ah in Lacagahan laga bixiyo Deeqaha ay Dowladda Somalia hesho.
Dowladda Maraykanka waxay Somaliya siiyeen 10-kii sanno ee la soo dhaafay Kharaj ku dhow 2 Billion oo Dollar, taasoo loogu talo galay ama loo adeegsaday Kaalmadda Horumarinta iyo Daryeelka Hawlaha Samafalka.
Somalia oo doonaysa in Imaaraadka Carabtu joojiyo Taageeradda uu siiyo Dowlad Goboleedyadda.